Faah faahin:- Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo weerar xoogan ku qaaday degmada Afgooye – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo weerar xoogan ku qaaday degmada Afgooye
Wararka naga soo gaaraya degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab ay maanta weerar xoogan ku qaadeen fariisin ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ku leeyihiin duuleedka degmadaas.
Dagaalayahanada Al-shabaab ee weerarka soo qaaday ayaa la sheegayaa inay wateen gaari noociisu yahay “Homey” waxayna markii hore isku ekeysiiyeen dad shacab, balse markii dambe ay keentay inay weeraraan fariisinka ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda ee ku yaalla duuleedka degmada Afgooye.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dagaalyahanadda Al-shabaab ayaa la sheegayaa in muddo 30 daqiiqo ah ay ku dagaalamayeen duuleedka degmada Afgooye, waxaana sida la sheegay dagaalkaasi ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin inta uu qasaarahaasi gaarsiisan yahay.
Xiriiro kala duwan oo aynu la sameeynay saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa ka gaabsaday inay faah-faahin dheeraad ah naga siiyaan dagaalkaasi iyo qasaaraha ka dhashay.
Dhinaca kale, xaaladda degmada Afgooye ayaa caawa ah mid aad u kacsan, waxaana xilliyadda qaarkood la maqlayaa rasaas oo si goos-goos ah u dhaceeysa, inkastoo aan la ogeyn cidda rasaastaasi rideeysa.
Illaa iyo haatan ma jiro hadal kasoo baxay maamulka degmada Afgooye iyo saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmadaas.
Sidoo kale, ma jiro wax hadal oo dhinaca Al-shabaab ay kasoo saareen dagaalkaasi, hase ahaatee dagaalada sidaan oo kale ah ayeey ku qaadaan magaalooyinka ay maamusho dowladda Soomaaliya.